लुम्बिनी प्रदूषणमा सबैको चिन्ता | eAdarsha.com
लुम्बिनी प्रदूषणमा सबैको चिन्ता
१. काठमाण्डौ उपत्यकामा अत्यधिक प्रदूषण फैलिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको बेला काठमाण्डौमा भन्दा डेढ गुणा बढी प्रदूषण लुम्बिनीमा भएको समाचार आएपछि त्यसले सम्बद्ध सबैलाई स्तब्ध पारेको छ। वातावरण विभागको प्रदूषण मापन सवेक्षणको आधारमा यस वर्ष लुम्बिनी देशको सबैभन्दा बढी प्रदूषित क्षेत्र भएको छ।
२. दुर्इ दशक पहिलेसम्म लुम्बिनी स्वच्छ र सफा क्षेत्र थियो। त्यहाँ सफा हावा वहन्थ्यो। तर डेढ दशक पहिलेदेखि जब त्यहाँ लुम्बिनीको नजिकै सिमेण्ट उद्योग, इट्टा उद्योगहरु स्थापना गरिए, त्यसैबेलादेखि लुम्बिनीको आकाशमा धुँवा र धूलो फैलिँदै गएको छ। त्यहाँ वरपर जति धेरै ती उद्योगहरु स्थापना गरिँदैछन्, उति धेरै लुम्बिनी क्षेत्र प्रदूषित हुँदै गएको छ।
३. सिर्द्धार्थ नगरदेखि लुम्बिनी जाने बाटोको आसपासमा धूलो र धुँवा उर्त्र्सजन गर्ने दुर्इ दर्जनभन्दा बढी उद्योगहरु छन्। धुँवा र धूलो निकाल्ने उद्योगहरु मध्ये सिमेण्ट, इँटा र कागज उद्योग मानिन्छन्। तिनै उद्योगहरु त्यहाँ स्थापना गरिएका छन्। यस्ता उद्योगहरुको संख्या प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ।
४. नेपालतिरको अवस्था यस्तो छ भने भारतीयहरुले पनि लुम्बिनीको छेउमा त्यस्ता उद्योगहरु स्थापना गरेका छन्। त्यहाँको प्रदूषित हावा पनि लुम्बिनीमा आउने गरेको छ। किन त्यसो गरिँदैछ, त्यो रहस्यमय भएको छ। त्यहँा प्रदूषण एकैचोटी या यही वर्ष मात्र बढेको होइन, प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ।
५. सरकारले स्वीकृत गरेको लुम्बिनी गुरु योजना अनुसार लुम्बिनी क्षेत्रको दश किलोमिटर भित्र लुम्बिनीलाई असर पार्ने खालको कुनै भौतिक संरचना बनाउनु निषेध गरिएको छ। तर त्यो निषेधाज्ञालाई न उद्योग स्थापना गर्नेले वास्ता गरे, न त स्वीकृति दिने सरकारले नै ख्याल गर्‍यो। त्यहाँ अहिले पनि उद्योग खोल्ने क्रम जारी छ।
६.लुम्बिनीमा यस्तो अवस्था आउँछ भनेर २०५६ सालमा लुम्बिनीमा आयोजित पहिलो अन्तराष्ट्रिर्य बौद्ध सम्मेलनले नै आवाज उठाएको थियो। त्यसको ६ वर्षपछि आयोजित दोश्रो बौद्ध सम्मेलनमा वातावरण सम्बन्धमा छुट्टै कार्यपत्र नै प्रस्तुत गरिएको थियो। त्यसैबेला शान्ति शहर निर्माण गर्ने अवधारणा पनि अघि सारिएको थियो।
७. अहिले लुम्बिनी नजिकै ध्वनि प्रदूषण गर्ने मसुलमानका मस्जिदहरु बनाइएको छ भनेर्र् इसाइका चर्चहरु पनि थपिँदैछन्। लुम्बिनी विकासका लागि गठित लुम्बिनी विकास कोषले यस क्षेत्रमा त्यत्ति सक्रियता देखाउन सकेको छैन। अत्यधिक प्रदूषित भएको समाचार सम्प्रेषित भएपछि सबैको ध्यान लुम्बिनीमा गएको छ। अब छिट्टै सरकारले त्यहाँ प्रदूषण कम गर्ने कदम चाल्नु पर्दछ र उद्योगहरुले पनि आ-आफ्ना तर्फबाट प्रदूषण कम गर्न के गर्न सकिन्छ त्यो गर्नुपर्दछ। धार्मिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक पुरातात्विक एवम् पर्यटकीय महत्व बोकेको क्षेत्रलाई कुनै पनि हालतमा बिग्रन दिनु हुँदैन। यसमा सबैले उत्तिकै चासो राख्नु पर्दछ।